လူမီနီယံအလွိုင်းဖောက်တံကားဂိုဒေါင်တံခါးကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite စမတ်ကားဂိုဒေါင်တံခါး,အကြမ်းခံကားဂိုဒေါင်တံခါးပြုပြင်ခြင်း,အဝေးမှဗီလာဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်.
Home > ထုတ်ကုန်များ > overhead အပိုင်းတံခါး > လူနေအိမ်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး > လူမီနီယံအလွိုင်းဖောက်တံကားဂိုဒေါင်တံခါးကို
ရုတ်သိမ်းတံခါးတံခါးကို panel ကထိုကဲ့သို့သောအရောင်သံမဏိပြားများနှင့်လူမီနီယံပြားအဖြစ်သတ္တုပြား၏ဖန်ဆင်းသည်, ထိုသူအချို့တို့သည်အများအားဖြင့်ဂိုဒေါင်တံခါးများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်း polyurethane သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ, ကာကှယျနှင့်အတူတည်ရှိနေပေမယ့်နေကြသည်။ အဆိုပါစက်မှုဇုန်တံခါးကိုစက်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်စက်ရုံများနှင့်မိုင်းများ၏ဂိုဒေါင်များထဲ၌ချိန်ခွင်လျှာစမ်းနှင့်အတူစက်မှုဇုန်တံခါးများအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်းလုံခြုံနှင့်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်ဒီကို manual ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါနှင့် installation နဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။
ရုတ်သိမ်းတံခါးကိုစက်၏အဓိက function ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ:
1) အဝေးမှထိန်းချုပ်: ကောင်းသောလုံခြုံရေးနှင့်တကွ, အဘယ်သူမျှမ Re-code ကိုလှိမ့ကုဒ်အဝေးထိန်းပေးရန်။
2) အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ်ကို: အဆိုပါအရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာအပေါ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင်ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်၏တန်ခိုးလျင်မြန်စွာလူများနှင့်စက်တွေကာကွယ်ပေးရန်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။
3) အလိုအလျောက်ဘရိတ်စနစ်က: အဆိုပါမော်တာအစာရှောင်ဘရိတ်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန် positioning ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်သည့်အလိုအလျောက်ဘရိတ်စနစ်, တပ်ဆင်ထားသည်။
4) လျင်မြန်စွာဖြန့်ချိလက်ကိုင်: အမြန်လွှတ်ပေးရန်လက်ကိုင်နှင့်အတူ, ကလျင်မြန်စွာလွယ်ကူသော installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်စက်ထဲကနေတံခါးကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
5) လက်စွဲစာအုပ်ကွင်းဆက်: စသည်တို့ကိုပါဝါပျက်ကွက်၏အမှု၌, တံခါးကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
6) စက်မှုန့်သတ်ချက် cam: ဒါဟာဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရာနှစ်ချက် cam န့်သတ်ချက်ချမှတ်။
အားဖြည့်: တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်တံခါးကို, ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့တံခါးကိုအငယ်ပြတင်းပေါက်တစ်ဗဟုင်တစ်ဦးအိမ်တံခါး, အိမ်တံခါးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြုံငုံအစှမျးသတ်တိကိုခိုင်ခံ့လေတိုက်ဝန်ခုခံမြှင့်တင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်တားဆီးနိုငျသောတံခါးကို panel က, အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးအားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူသည် အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာမှတံခါးကို။
တံခါးကို panel ကို၏အလေးချိန်ကြောင့်တံခါးပုံပျက်သော။
ဖျံ: အပူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, တန်တိုင်းရိုးအကြားကွာဟချက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်, တံခါးကို panel ကိုနှင့်တံခါးကို panel ကိုတံဆိပ်ခတ်ရပါမည်။ စက်မှုဓာတ်လှေကားတံခါးကို၏ထိပ်, ဘက်များနှင့်အောက်ခြေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖျံရှိသည်။
လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး: အဝေးထိန်း, ကြီးမားတဲ့အဝေးထိန်းအကွာအဝေး, ခိုင်လုံသောအသက် 30 မီတာအတွင်း
ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်နိမ့်ဆူညံသံ: တဲ့အခါမှာတံခါးကိုပြေး, ဆူညံသံအဆင့်ကိုတိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေတဲ့ခေတ်သစ်လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်သေချာ, အစား roller ရှပ်တာတံခါးကအကောင်းဆုံးစံပြထုတ်ကုန် 60 DB မှုတ်။
တင့်တယ်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ: အစိုင်အခဲများနှင့်လျှပ်ကာကို double တံခါးအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပသံမဏိ panel က, polyurethane insulator တွင်လည်း, panel ကိုအထူ 35 မီလီမီတာ-40 မီလီမီတာ,
လုံခြုံရေး: တံခါးကိုပိတ်ကာလအတွင်းနာကျင်မှလူနှင့်ကားများကိုကာကွယ်ရန်, တံခါးကိုတွေ့ကြံပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ကြိမ်အလိုအလျောက်တုံ function ကိုစတင်ရန်လည်းရှိပါတယ် (optional) အာရုံခံကိရိယာ infared ပါပြီ
တစ်စုံတစ်ဦးကတံခါးကိုခြိုးဖောကျတဲ့အခါမှာ Anti-ခိုးယူနှိုးဆော်သံ function ကို, tweeter (optional) သတိပေးပါလိမ့်မယ်: အာမခံ
remote control လက်ခံသည့်စနစ်: superheterodyne လက်ခံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း, မြင့်သောတည်ငြိမ်မှု, လှိမ့်ကုဒ်အားလျှို့ဝှက်။
နညျးလမျးမြားကိုဖွင့်အမျိုးပေါင်းတံခါးကို: အဝေးထိန်း, လျှပ်စစ်, လက်စွဲစာအုပ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်တံခါးကိုလည်းအရေးပေါ်အာဏာကိုသော့ခလောက်တပ်ဆင်ထားသည်။
တံခါးကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသော့ခတ်: အပြည့်အဝတံခါးပိတ်မဟုတ် backup လုပ်ထားပါဝါတပ်ဆင်ထားပါဝါရုတ်တရက်ပျက်ကွက်သူတံခါး, ရိုးရှင်းစွာပြန် clutch ဆွဲထုတ်, တံခါးကိုသော့ခတ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်, f, ကြင်နာစွာငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Wha t ကိုသငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှရနိုင်မလဲ?
ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite စမတ်ကားဂိုဒေါင်တံခါး အကြမ်းခံကားဂိုဒေါင်တံခါးပြုပြင်ခြင်း အဝေးမှဗီလာဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်. ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite ဂိုဒေါင်တံခါး ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite လူနေထိုင်ရာကားဂိုဒေါင်တံခါး ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite လူနေထိုင်ရာအပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး ရိုးထုံးတမ်းစဉ်-Hite အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး